Amasiko KaKhisimusi eSontweni LamaMormon
Inkolo & Ingokomoya Izinkolelo & Imfundiso
Amasiko kaKhisimusi e-LDS
Amalungu amaningi eThe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints agubha amaholidi ngokusebenzisa imisebenzi efanayo. Thola ezinye zezinkambiso zethu ze-LDS Christmas futhi ubone ukuthi ziphi okufana nemikhuba kaKhisimusi yomndeni wakho.
UKhisimusi eThekwini Square
I-RichVintage / Getty Izithombe
Isenzo esisodwa esivamile kakhulu seLDS Christmas senziwa amalungu eSonto ukuvakashela iThempeli Square ngoKhisimusi. Njalo ngonyaka, iBandla likaJesu Kristu labaNgcwele bezinsuku zokugcina lihlobisa i-Temple Square eDolobheni laseSalt Lake City ngezibani ezinhle zikaKhisimusi.
Omunye umkhuba weKhisimusi we-LDS ukubuka iNgqungquthela Yonyaka kaKhisimusi Yokuzinikela Kokuqala kukaKhisimusi, eyasakazwa eSikhungweni Senkomfa (eThekwini Square) kuya ezakhiweni zesonto emhlabeni jikelele.
I-Party ye-Ward Christmas and Dinner
Amagceke amaningi eSontweni aphethe i-Party ye-Christmas Party, okuyinto evame ukudlala. Lo mkhuba omnandi we-LDS kaKhisimusi uvame ukuhambisana nohlelo olukhethekile lukaKhisimusi, ukucula, ukucula iqembu, ukuvakashelwa okukhethekile okuvela eSanta, nokudla okuningi-ngisho noma kungokwesokudla kuphela.
Ngezinye izikhathi izinhlelo zikaKhisimusi zihlanganisa ukubonakaliswa kobuKristu, izingane kanye nabantu abadala abagqoke futhi bedlala izingxenye zikaJoseph, uMariya, Abelusi, amadoda ahlakaniphile nezingelosi.
Umsebenzi weKhisimusi Wenhlangano Yenkululeko
i-istetiana / i-Getty Izithombe
Izinkampani eziningi zokunakekelwa zendawo zineziko le-LDS likaKhisimusi lokubamba umsebenzi weKhisimusi lapho odade beza khona ukwenza izikhwama zeKhisimusi, bafunde futhi badle iziqabu. Amanye amawadi ngisho abe nesidlo saseKhisimusi seNhlangano Yenkululeko. Lemisebenzi Yenhlangano Yenkululeko yinto ejabulisayo kakhulu njengoba odade banethuba lokuhlangana, ukuxoxa, nokwazana kangcono.
Izipho zikaKhisimusi zabampofu
asiseeit / Getty Izithombe
Enye imikhuba ejwayelekile ye-LDS kaKhisimusi ukusiza ukuhlinzeka uKhisimusi kulabo abaswele. Ngokuvamile kusho izipho zezingane nokudla komndeni. Isigceme sendawo sinquma izidingo zamalungu ayo (futhi ngokuvamile abanye emphakathini abangewona amalungu) futhi bacela usizo oluvela kuzo zonke izigceme.
Amagceke amaningi akha isitifiketi sikaKhisimusi esihlotshisiwe kwi-foyer yesakhiwo seSonto bese ubeka amathegi e-Christmas emthini. Kulezi tags izinto zidinga, isibonelo umaki ungafunda, "Isayizi yezingubo zesifazane 5," "I-toy yobudala be-toy", "ibhasikidi yezithelo," noma "amakhukhi ayishumi nambili." Amalungu esigceme athatha amathegi ekhaya, athenge izinto, futhi abuyisele kubaholi bawo bendawo abahlela, bahlanganise futhi basakaza izimpahla ezidingekayo.
John Nordell / Getty Izithombe
Enye imikhuba ye-LDS kaKhisimusi evamile ukukhombisa isimo sobuKristu noma ukuveza ukuzalwa kukaJesu ngokusebenzisa abalingisi abaphilayo futhi ngezinye izikhathi ngisho nezilwane zangempela. Ezinye izigxobo zibambe umsebenzi wokuzalwa kukaKhisimusi wonyaka lapho abantu kulo lonke umphakathi, noma yiliphi ihlelo, beletha amakhethi abo okuzalwa nokuwabonisa esakhiweni sesonto lendawo. Bonke bamenyiwe ukuba baze babone ukuboniswa, vakashela omunye nomunye, futhi bahlanganyele ngokuqabuleka okukhanyayo.
Imisebenzi Yesevisi KaKhisimusi
UJoseph Sohm / Getty Images
Njengamalungu eSonto, sisebenza kanzima ukugxila emizamweni yethu ekukhonzeni labo abaseduze kwethu, kubandakanya omakhelwane bethu, abangane, imindeni kanye nomphakathi. Amagceke asekhaya angase abe nenqubo yeKhisimusi ye-LDS yokuhlinzeka ngezinsiza ezibhedlela, emakhaya asebehlengikazi, nakwezinye izindawo zokunakekelwa. Izikhathi eziningi, intsha ihlelwe ukuhamba ngeKhisimusi, ukuvakashela abagulayo nokukhulile, nokusiza labo abadinga ngokudla, umsebenzi wendawo, nezinye izinsizakalo.
Izinkonzo zeKhisimusi zeSonto
I-Mormon Tabernacle Choir. mormontabernaclechoir.org
Enye imikhuba ejwayelekile ye-LDS Christmas ibamba izinkonzo ezikhethekile zikaKhisimusi ngeSonto ngaphambi kukaKhisimusi. Ngesikhathi somhlangano we-sakramente, kodwa emva kwesimiso se-sakramente , amalungu ngokuvamile abe nenhlelo kaKhisimusi lapho kwenziwa khona izinombolo zomculo ezinhle, izingxoxo ezigxile kuJesu Kristu zinikezwa, futhi izingoma zikaKhisimusi zihlabelelwa yibandla.
Uyakwamukela kakhulu ukuza nesikhukhula nathi kule nkathi yeKhisimusi ewadi / igatsha lendawo eliseduzane nawe.
AmaKhisimusi KaKhisimusi ejele
Maciej Nicgorski / EyeEm / Getty Izithombe
Ngake ngiphila esifundazweni esinesikhathi sikaKhisimusi sikaLDS sokubhaka amakhukhi kaKhisimusi kulabo abasejele. Unyaka ngamunye Abangcwele bezinsuku zokugcina babezobhaka ama-cookies amaningi (azo zonke izinhlobo) ezihlanganisiwe ku-baglock ye-Ziplock ngeqoqo lama-cookies angu-6 ngamunye. Lawa makhukhi abese enikezwe enye inhlangano esebenza nejele lasekhaya ukuhlangabezana neziqondiso zabo.
Unyaka ngamunye, izinkulungwane zamakhukhi ziyabhakwa, zihlinzeka isipho sikaKhisimusi esilula kulabo abavame ukuthola lutho ngoKhisimusi.
Izivakashi zamukelekile njalo ukuba zihlanganyele nathi kunoma yimiphi imisebenzi yethu yeKhisimusi, amaphrojekthi enkonzo, noma izinkonzo zokukhulekela. Woza ukukhulekela nathi ngenkathi yeKhisimusi ngokuthola isigceme sendawo noma igatsha eliseduze nawe.
Ingabe Amamoroni Avunyelwe Ukuphuza I-Tea?
12 Izindlela Zokujabula Umshado Ojabulisayo
Umthetho Wokusulwa: Ukuhlanzeka Ngokocansi
Funda Ukuthandaza Kulezi 4 Izinyathelo Ezilula
Thola i-LDS (i-Mormon) Amasayithi angathandwayo e-Singles Online
Izindlela 10 Zabagcini Bezinsuku Zokugcina Ukuthuthukisa Ukuthobeka
Umoya Ongcwele Uyingxenye Eyesithathu Ehlukile KubuNkulunkulu
Okubalulekile mayelana nokubukwa kweSonto leMormoni kumaTattoos
AmaMormon Akholelwa Ukuthi UJesu Wazalwa Ngo-Ephreli 6
Kulungile Xoxa ngamaMormon namaGays, Ingxenye 3
Amabhayisikobho angu-10 aphezulu we-Snowboard Wonke Isikhathi
Izixhumanisi Zezeziso Nezigwebo - Ukubonisa Ukuqhathanisa
Cómo buscar gratis y encontrar personas en Estados Unidos
Ukufaka isicelo esikoleni esiphakeme: Okudingeka Ukwazi
Amazwi avame ukudideka weFir and Fur
Indlela Yokunciphisa Izinkomba Ngokusebenzisa i-Capo
Amakhono Okuxhumana Emsebenzini Wabafundi be-ESL
'I-Picnic': Idlalwa nguWilliam Inge
Indlela Yokutshela Abazali Bakho Ufuna Ukudlulisa Amakholeji
I-Carburetor Balancing Ukusebenzisa Amaphutha Wokuphumula
Izinhlobo ze-Angel in Christianity (The Pseudo-Dionysius Angelic Hierarchy)
Indlela Yokuthenga I-Ski Clothing: Ukuqhathanisa Izindleko Nekhwalithi
Kwethula 'Se' eSpanishi
Ama-Monologue ayisikhombisa amaDamatic by Sophocles
Uhlu lwe-Strong Acids
Izipho Izindlela zabaculi: Izipho zezezimali nezindatshana ezincane
I-Bethel University GPA, i-SAT ne-ACT Data
Ngumkhosi we-Saint Anthony?
I-Twenty-One: Idlalwa kanjani i-Casino Blackjack